We Fight We Win. -- " More than Media ": ကိုညီညီအောင် မမျှော်လင့်ဘဲ လွတ်မြောက်လာ
ကိုညီညီအောင်ကို ဘန်ကောက် သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်တွင် တွေ့ရစဉ်။
According to VOA news interview with his girlfriend,noone knew that he went back to Burma 8 times.he went secretly.When he came back from Burma,he did the politice.Then he went back to Burma again.he's keep on doing like that 8 times till he was arrest in burma.Why Myanmar embassy gave him visa 8 times?Myanmar embassy didnt know that he wasapolitican?
If he wants to do underground movement in Burma,he can cross from border secretly but he went legally with visa.All the M.I know that he is here.When the M.I know,can he do the UG movement?
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးဖို့ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့သူက ၄၀၁ ကို လက်မှတ်ထိုး ထွက်ခံသတဲ့ ဟားဟား ကျတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကလဲ ၃ နှစ်ထဲကို... အော် ဒါလားဟဲ့ ညီညီအောင် သိသွားရပြီပေါ့...
ခင်ဗျားတို့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို ၀န်မခံရဲတာပဲ။
ခင်ဗျားတို့လဲ ညီညီအောင်လို လူစားမျိုးတွေပဲလားးး